Ciidamo loo direy deegaano ay dagaalo ka socdaan - Radio Risaala: Somali News Online
Home FAALLOOYINKA Ciidamo loo direy deegaano ay dagaalo ka socdaan
Madaxwaynaha Dowlad Goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye (Qoorqoor) iyo kuxigeenkiisa Cali Daahir Ciid ayaa baaq Nabadeed u diray Beelaha ku dagaalamaya deegaanka Balicad we Gobolka Galgaduus.
“waxaan si wadajir ah u cambaarneynaa dagaalada nasiib darada ah ee kasocda gudaha xadka ay wadaagaan Dowlad Deegaanka Soomaalida Ethiopia iyo Dowlad Goboleedka Galmudug.
Madaxdu waxay xanuunka la qaybsanayaan una tacsiyaynayaan dadka ehelkoodu ku dhinteen dagaaladaasi iyo kuwa ku dhawacmeen. waxayna Alle uga baryeen inta dhimatay inuu u naxariisto, inta dhaawacaana u booga dhayo.
Madaxda ayaa sidoo kale amreen in si deg deg ah loo joojiyo dagaalka loona dhaga-nuglaado baaqyada nabadeed ee madaxda iyo waxgaradka samaha jecel.
Madaxda waxay kaloo ay xuseen in ciidamo iyo dad masuuliyiin ah u direen deegaanada dagaaladu ka socdaan si loo joojiyo colaada, sidoo kalana ay xiriiro kala sameeyeen madaxda Dowlad Deegaanka Soomaalida Ethiopia ka qayb qaadashada joojinta colaada ka taagan xuduudka ay wadaagaan.
Previous articleManchester City iyo Real Madrid oo ku dagaalami doona Harry Kane
Next articleBaarlamaanka Koonfur Galbeed oo ansixiyey Sharciga miisaaniyadda 2020